Best Phone Camera 2019 : The Best Android And Apple Smartphone Cameras | Net Guide
Microsoft Surface Duo2တှငျ 5G နှငျ့ ပိုကောငျးတဲ့ ကငျမရာ ပါဝငျလာမညျ
Xiaomi Redmi Note 10 ရဲ့ ဒီဇိုငျးကို သိရပွီဖွဈပွီး Snapdragon 678 Chipset သုံးလာမညျ
OPPO A74 ထှကျဖို့ နီးလာပွီ
OPPO Find X3 စီးရီးကို မတျလ 11 ရကျနတှေ့ငျ မိတျဆကျလာမညျ
Home Article Best Phone Camera 2019 : The Best Android And Apple Smartphone Cameras
Best Phone Camera 2019 : The Best Android And Apple Smartphone Cameras
လှနျခဲ့တဲ့ 10 နှဈလောကျကသာ ကဈြလဈြသေးငယျတဲ့ စမတျဖုနျးလေးတှဟော ကငျမရာတှနေရောမှာ အစားထိုးနိုငျတယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ ပွောလိုကျမယျဆိုရငျ ဒါဟာ ရယျသှမျးသှေးစရာကိစ်စ၊ လှောငျပွောငျစရာကိစ်စအနနေဲ့ ရှိနမှောပါ။ အနာဂတျရဲ့ဖွဈအငျတှကေို မထေ့ားလို့ မရပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အခု 2020 ခုနှဈကိုရောကျဖို့ နီးလာတဲ့အခြိနျမှာ 108MP ကငျမရာဆငျဆာတှတေောငျ ထှကျလာခဲ့ပါပွီ။ ဒါဟာ ဖွဈတနျစှမျးတှကေို ကြျောဖွတျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ 2019 ခုနှဈအတှငျးမှာ စမတျဖုနျးဝယျခဲ့မယျဆိုရငျ သခြောတဲ့အခကျြကတော့ အဲ့ဒီဖုနျးမှာ notch ခပျသေးသေးလေး ပါဝငျမှာပါ။ ဒီထကျပိုရငျတော့ အဲ့ဒီဖုနျးရဲ့နောကျဘကျမှာ ကငျမရာ3လုံး (သို့)4လုံး ဖွဈနမှောပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ 2019 ခုနှဈအတှငျး စမတျဖုနျးနညျးပညာလောကအတှကျ အပွောငျးအလဲဆုံး နညျးပညာဆိုရငျတော့ ကငျမရာလို့ ပွောရမှာပါ။ ဒီထကျအသေးစိတျပွောရမယျဆိုရငျ ကငျမရာဆငျဆာအရှယျအစားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ dual-Camera ခတျေကနေ အခုဆိုရငျ Quad-Camera ခတျေတောငျ ရောကျနပေါပွီ။ အဲ့လောကျကငျမရာတှေ အဆငျ့မွငျ့လာခဲ့တော့ သုံးစှဲသူတှအေနနေဲ့ ဘယျဟာလေးက ပိုကောငျးမလဲဆိုတဲ့ ရှေးခယျြရခကျတာမြိုးတှေ ကွုံရမှာပေါ့။ ဒီကွားထဲ ဒီဇိုငျးပိုငျးကို ဦးစားပေးကိုငျတဲ့သူတှဆေိုရငျ ပိုဆိုးပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ဖုနျးဟာ ဒီဇိုငျးနဲ့ ကငျမရာ2မြိုးလုံးမှာ ပွညျ့စုံတယျလို့ ထငျရဲ့လား။ သခြောတာကတော့ ကငျမရာရဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှဟော ထိပျတနျးအဆငျ့မှာ ရှိပါတယျ။ 2019 မှာ ဘယျစမတျဖုနျးကငျမရာတှကေ အကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့လဲ။ သူတို့မှာရော ဘယျလိုစှမျးဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျနလေဲဆိုတာ တဈခကျြလလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။
(1). How to chooseacamera phone ?
ကငျမရာဖုနျးကောငျးကောငျးတဈလုံးကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲဆိုရငျတော့ အောကျမှာပေးထားတဲ့ အခကျြအလကျတှေ မူတညျပွီး ရှေးရပါလိမျ့မယျ။ ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနရေငျတော့ သငျ့ဖုနျးဟာ ဓာတျပုံရိုကျရငျ အကောငျးဆုံးရုပျထှကျကို ရရှိနစေမှောပါ။
(2). Megapixels aren’t everything
သူ့ကိုတော့ MP လို့ အတိုကောကျ ချေါကွပါတယျ။ pixel count တှမြေားလေ သငျ့ဖုနျးကငျမရာ ကောငျးလလေားဆိုတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ အခွားအခကျြတှနေဲ့ ထပျမံပေါငျးစပျ ပေးရပါသေးတယျ။ သို့ပမေယျ့ အမြားအားဖွငျ့တော့ ဒီနထှေ့ကျနတေဲ့ ဖုနျးတှဟော pixels ပိုငျးမှာ ပိုမြားပွီး image တှကေို detailed ဖမျးယူနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ resolution ပိုငျးကလညျး ကွီးမားပါသေးတယျ။ အခုဆိုရငျ 48MP ကငျမရာတပျထားတဲ့ ဖုနျးတှတေောငျ စြေးကှကျထဲမှာ အတျောရောကျနပေါပွီ။
(3). Don’t forget pixel and sensor size
ဒီအပိုငျးကလညျး အရေးကွီးလှပါတယျ။ ဆငျဆာဟာ ကငျမရာရဲ့ အသညျးနှလုံးလို့တောငျ ဆိုကွပါတယျ။ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆငျဆာအရညျအသှေးရှိမှာသာ ကောငျးမှနျလှပတဲ့ ရှုခငျးတှနေဲ့ ညအလှတှကေို အကောငျးဆုံး ဖမျးယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။ 48MP ကငျမရာတှအေတှကျ အသုံးပွုနတေဲ့ ဆငျဆာတှကေတော့ Sony IMX586 နဲ့ Samsung GM1 sensors တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
(4). Depth of field
ကောငျးမှနျပွညျ့စုံသော Depth of Field (DOF effect) လို့ချေါတဲ့ Background Blur ပုံတှေ ရရှိနိုငျဖို့ကလညျး အရေးကွီးလှပါတယျ။ ဒီလုပျဆောငျခကျြကလညျး လကျရှိထှကျထားသမြှ ဖုနျးတှတေိုငျးမှာ ပါဝငျနပေါပွီ။ ဓါတျပုံရိုကျရာမှာ Subject တဈခုကို Focus ဖမျးရာတှငျ Focus ပွတျသားမှုဧရိယာဟာ Subject ရဲ့ ဘေးဘယျညာ ပွငျညီပျေါတှငျ တဈပွေးတညျး ကရြောကျပါတယျ။ အဆိုပါ Subject ရဲ့ရှမှေ့ာ ဘယျလောကျအထိ ပွတျသားမလဲ။ နောကျမှာရော ဘယျလောကျအထိ ပွတျသားမလဲဆိုတာကတော့ Depth of Field နဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ လူပုံ (Human Portrait) ရိုကျရာတှငျ အထူးပွုပွလိုတဲ့ နရောလေးကိုဘဲ အဓိကပွပွီး ပုံကို အနှောကျအယှကျဖွဈစမေယျ့ နောကျခံ (Background) ကို တတျနိုငျသလောကျ ၀ါးနစေပေါတယျ။ ဒါကို DOF အပါး (Shallow Depth of Field) လို့ ချေါကွပါတယျ။ Depth of Field အထူ-အပါး ဘယျလိုဖွဈလာမလဲဆိုတာကတော့ အကွမျးအားဖွငျ့ Aperture အကဉျြးအကယျြ၊ Focal length အတိုအရှညျ၊ Subject နဲ့ ကငျမရာအနီးအဝေးတို့အပွငျ ကငျမရာ Sensor အရှယျအစားတို့နဲ့လညျး ဆိုငျပါတယျ။ image တှေ detail ကကြ ရနိုငျစဖေို့အတှကျ မွငျ့မားတဲ့ resolution ကလညျး လိုအပျပါတယျ။ ဖုနျးကငျမရာတှအေနနေဲ့ 720p, 1080p ကနေ အခုဆိုရငျ 4K ထိတောငျ ရနပေါပွီ။
(5). iPhone 11 Pro : Best point and shoot camera phone
iPhone 11 Pro ကတော့ အစဉျအလာအတိုငျးပဲ အကောငျးဆုံး ကငျမရာဖုနျးတှထေဲမှာ ထိပျဆုံးကနေ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စြေးကတော့ ကွီးလှနျးပါတယျ။ ဒီဖုနျးရဲ့ ကငျမရာပိုငျးအနနေဲ့ Dynamic range တှေ ပိုကောငျးပွီး ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ ဓာတျပုံအရညျအသှေးနဲ့ ကွညျလငျပွတျသားတဲ့ 4K ဗီဒီယိုမြားကို 60fps နှုနျးနဲ့ ရိုကျကူးနိုငျတာပါ။ iPhone 11 Pro ရဲ့ နောကျဘကျမှာ ကငျမရာ3လုံး တပျဆငျပေးထားပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈက ထှကျခဲ့တဲ့ iPhone Xs ထကျ 1 လုံး ပိုလာတာပါ။ အပိုပါလာတဲ့ ကငျမရာဟာ 12-megapixels ဖွဈပမေယျ့ full-frame ကငျမရာတှလေိုမြိုး 13mm lens နဲ့အတူ ultrawide field of view စှမျးဆောငျခကျြကို ပေးပါတယျ။ နောကျထပျ ကငျမရာ2လုံးကတော့ 12MP တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာဒီဇိုငျးကတော့ လေးထောငျ့ခပျဆနျဆနျပါ။ Pro ရဲ့ ကငျမရာစနဈတှကေို အသေးစိတျပွောရမယျဆိုရငျ 12-megapixel wide-angle lens ၊ 12-megapixel telephoto lens နဲ့ 120-degree field of view ပါတဲ့ 12-megapixel ultrawide lens တို့ တပျဆငျပေးထားပါတယျ။ Telephoto နဲ့ ultrawide2ခု ပေါငျးပွီး zoom in (သို့) out အလုပျကို လုပျမှာပါ။ ရိုကျလိုကျတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ပိုမို details ကဖြို့နဲ့ pixels ပိုငျးဆိုငျရာမှာ ပိုမာလာစဖေို့အတှကျ ကငျမရာနညျးပညာအသဈဖွဈတဲ့ Deep Fusion feature ကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ camera modecamera modes အသဈအနနေဲ့ 4K video တှကေို 60fps နဲ့ရနိုငျမှာပါ။
(6). Mi CC9 Pro : World’s first 108MP penta-camera
XiaomiMi CC9 Pro Premium Edition ရဲ့ ကငျမရာစှမျးဆောငျရညျ အဆငျ့သတျမှတျခကျြဟာ DXOMARK Camera tests ပွုလုပျပွီးနောကျ overall score အမှတျပေါငျး 121 မှတျရရှိပွီး ထိပျဆုံးမှာ Huawei Mate 30 Pro နဲ့အတူ ရပျတညျလကျြ ရှိပါတယျ။1/1.33″ Quad-Bayer sensor ဖွဈတဲ့ 108MP ပါ။ 0.8µm pixel size, 25mm f/1.7 lens နဲ့ပါ။ Premium edition မှာတော့ 8P lens ကို သုံးထားပါတယျ။ နောကျတဈခုက 2x zoom ဖွဈတဲ့12MP, f/2.0, 1.4µm pixel size, dual-pixel AF ၊ ပွီးတော့ 5x zoom ကငျမရာ 5M, f/2.0, saves 8MP ၊ Ultra wide-angle က 20MP, 13mm f/2.2, 1.12µm pixel size ၊ ပွီးတော့ Macro ကငျမရာ 2MP, 1/5″, 1.75µm pixel size, f/2.4; AF, 1.5-10cm focusing distance တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အရှဘေ့ကျ notch ထဲမှာတော့ 32MP, 0.8µm pixel size, f/2.0 ကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ကငျမရာတှအေတှကျ Dual flashes တပျပေးထားပွီး hard light နဲ့ soft light ကို ခှဲခွားပေးပါလိမျ့မယျ။ Mi CC Pro ရဲ့ ကငျမရာစနဈ အလုပျလုပျပုံဟာ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလှနျးလှပါတယျ။ ဆငျဆာအားလုံးပေါငျး အလုပျလုပျပွီး အကောငျးဆုံး 1 ခုအဖွဈ ဖနျတီးပေးတာပါ။ 1.1x ကနေ 1.9x အထိ ခြဲ့ဖို့အတှကျ အဓိကအာရုံခံကိရိယာကို သုံးပါတယျ။ 2x ကနေ 3.7x အထိ ခြဲ့ဖို့ကိုတော့ 12MP 2x telephoto ကငျမရာကို သုံးပါတယျ။ 3.8x ကနေ 50x အထိ ခြဲ့ဖို့ကိုတော့ 5MP 5x telephoto ကို အသုံးပွုပါတယျ။ 10x hybrid zoom အတှကျ5MP sensor ကို သုံးပွီး 10x zoom အထကျကိုတော့5MP ကငျမရာရဲ့ digital zoom ကို အသုံးပွုပါတယျ။
(7). Google Pixel4: The best for stargazers
အကောငျးဆုံးတှထေဲက ပုံမှနျထကျခှဲထှကျနတေဲ့ ဖုနျးလို့ဆိုရမှာကတော့ Pixel4ဖုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ ကငျမရာတှအေတှကျ Dual Pixel autofocus သုံးထားတဲ့ 12MP sensor ကို သုံးထားပါတယျ။ ကငျမရာတှမှော optical နဲ့ electronic image stabilization တှေ ထညျ့ထားပွီး 1.4µm pixels နဲ့ bright f/1.7 aperture တှကေိုပါ သုံးနိုငျမှာပါ။ နောကျထပျ ကငျမရာတဈခုကတော့ 16 MP Telephoto lens ဖွဈပါတယျ။ optical နဲ့ digital focus ပေါငျးစပျထားတဲ့ 2x zoom ကို သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အစောပိုငျးသတငျးတှေ ထှကျထားတဲ့ Motion Sense လို့ဆိုတဲ့ feature သဈတဈခုကို ထညျ့သှငျးလာပါတယျ။ Motion Sense မှာ Google ရဲ့ Project Soli နညျးပညာ အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ ဖုနျးရဲ့ display ရှမှေ့ာ လကျနဲ့ဝှယေ့မျးလိုကျတာနဲ့ သီခငျြးတှကေို ထိနျးခြုပျတာ၊ ဖုနျးချေါဆိုမှုတှေ ထိနျးခြုပျတာလညျး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ Motion Sense ကို ဘယျအခြိနျမဆို disable လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ အဓိကကငျမရာဟာ 4K 30fps video capture နဲ့ 120fps slow-motion mode တှကေို သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ Pixel4အတှကျ 8MP selfie ကိုသာ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ 1.22μm pixel size, f/2.0 aperture, 90° FOV, 1080p 30fos video recording ပွုလုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
(8). Huawei Mate 30 Pro : The best superzoom smartphone
Mate 30 Pro ဖုနျးရဲ့ ကငျမရာပိုငျးအတှကျ ကငျမရာလေးလုံးကို နောကျဘကျ အလယျတညျ့တညျ့မှာ စကျဝိုငျးပုံစံနဲ့ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ကငျမရာတှကေတော့ 40MP Super Sensing ကငျမရာ၊ 40MP ကငျမရာ (Cine Camera) တို့ ပါဝငျပွီး 40MP ကငျမရာနှဈလုံးကို 3D ToF Sensor နဲ့ တှဲသုံးကာ Bokeh ဗီဒီယိုမြား ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ တတိယကငျမရာက 8MP ဖွဈပွီး 3x Optical Zoom ပါဝငျကာ 5x Optical Hybrid Zoom အထိ သုံးနိုငျပါတယျ။ Tele နဲ့ Wide ကငျမရာနှဈမြိုးလုံးတို့မှာ Optical Image Stabilization ပါဝငျလာပါတယျ။ 40MP ကငျမရာဆငျဆာနှဈခုလုံးတို့က ကွီးမားတဲ့အပွငျ အလငျးဝငျပေါကျ ပိုကဉျြးလာပါတယျ။ အဓိကကငျမရာမှာ f/1.6 Aperture သုံးထားပွီး Cine Camera မှာ f/1.8 Aperture ပါဝငျလာပါတယျ။ ဗီဒီယိုရိုကျကူးမှုကို ပိုကောငျးအောငျ အဆငျ့မွငျ့တငျထားပွီး 4K@60fps ဖွငျ့ ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Slow-Motion Mode မှာလညျး Frame Rate အတျောမွငျ့သှားပွီး 7680fps@720p ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ HDR+ Colors ဖွငျ့ 4K Time Lapse ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ ညဖကျဗီဒီယိုရိုကျကူးတဲ့အခါ ISO 52000 အထိ သုံးလာနိုငျပါတယျ။ ရှကေ့ငျမရာကတော့ 32MP ဖွဈပွီး 3D Scanning Hardware လညျး ပါဝငျပါတယျ။ dual-LED flash, laser focus sensor, color temperature sensor နဲ့ 3D sensor တို့ ထောကျပံ့ပါတယျ။
(9). Samsung Galaxy Note 10 Plus : A great all-rounder witharemote shutter S Pen
Note 10+ ရဲ့ ကငျမရာပိုငျးမှာတော့ ပုံမှနျကငျမရာ3မြိုးမှာ ToF Camera တဈလုံးအပိုပါပွီး အရာဝတ်ထုတှကေို Scan လုပျပွီး 3D Photo အဖွဈ ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။ ကငျမရာ3လုံးရဲ့ စှမျးရညျတှကေ 12MP Dual Pixel ၊ 45°FoV, f/2.4 aperture နဲ့ 12MP Telephoto lens ၊ 123° Ultra Wide sensor ပါတဲ့ 16MP ကငျမရာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အရှဘေ့ကျမှာတော့ 80° wide-angle lens, f/2.2 aperture ပါတဲ့ 10MP Dual Pixel ကငျမရာကို တပျပေးထားပါတယျ။ 12MP Dual Pixel ကငျမရာဟာ f/1.5/f/2.4 variable aperture အမြိုးအစားပါ။ သူ့ရဲ့မကျြနှာပွငျက 6.8-inch Quad HD+ (3040 × 1440 pixels) တောငျရှိပွီး Curved Dynamic AMOLED Infinity-O display ကို သုံးထားပါတယျ။ Note10+ မှာတော့ ပုံမှနျ Note နဲ့ ကှဲပွားမှုတှရှေိနပွေီး 12GB RAM အမွငျ့စားနဲ့ သုံးနိုငျမှာပါ။ ပရိုဆကျဆာပိုငျးမှာတော့ Note 10 နဲ့ တူတူပဲလို့ ဆိုနိုငျပွီး Global အလုံးမှာတော့ 7nm Mobile Platform ဖွဈတဲ့ Octa-Core Samsung Exynos9Series 9825 ကို သုံးထားပွီး အမရေိကနျဗားရှငျးဖုနျးမှာတော့ Snapdragon 855 7nm Mobile Platform နဲ့ ဖွဈပါတယျ။ Android 9.0 (Pie) ကို သုံးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီ 4300 mAh မှာ 45W fast wired charging ထောကျပံ့မှာပါ။
(10). OPPO Reno 10X Zoom : A sensational zoom foracamera phone
တိကသြခြောတဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဖမျးယူရိုကျကူးနိုငျတဲ့နရောမှာ သူကလညျး ထိပျတနျးအဆငျ့ ရှိနပေါတယျ။ OPPO Reno 10x Zoom စမတျဖုနျးတှငျ အဝေးမှ ပုံရိပျမြားကို lens သုံးခု ပူးပေါငျးအလုပျလုပျခွငျးဖွငျ့ ကွညျလငျပွတျသားစှာ ရိုကျကူးနိုငျသော 10x Hybrid Zoom နဲ့အတူ 60x Digital Zoom ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ Reno 10x Zoom တှငျ OIS စနဈ ထောကျပံ့ပေးထားသော F/1.7 aperture ပါဝငျသညျ့ 48MP Sony IMX 586 main camera, 8MP 120° Ultra Wide-Angle Camera နှငျ့ 13 MP Telephoto Camera တို့ကိုလညျး တပျဆငျပေးထားတာကို တှရေ့မှာပါ။
(11). OnePlus 7T Pro : Excellent imaging and across-the-board value
OnePlus 7T ဖုနျးကလညျး ကငျမရာအကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ဖုနျးတှထေဲမှာ အဆငျ့တဈခုအနနေဲ့ ရှိနပေါသေးတယျ။ 90Hz Refresh Rate ကို သုံးထားပွီး HDR10+ က အရောငျအသှေး ပိုစုံလငျစပေါတယျ။ အပူလြှော့ခပြေးတဲ့ နညျးပညာလညျး ပါပါတယျ။ အနောကျကငျမရာ3လုံးပါလာပွီး 48MP Main Camera နဲ့အတူ မွငျကှငျးကယျြနဲ့ အနီးကပျဓါတျပုံတှကေို ရိုကျကူးပေးနိုငျတဲ့ 16MP Camera ပါပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ 2x Optical Zoom ပါတဲ့ 12MP Telephoto Camera ထညျ့ထားပါတယျ။ Nightscape Mode က အလငျးရောငျနညျးပါးတဲ့ အခွအေနတှေမှော ပွညျ့စုံတဲ့ ဓါတျပုံတှေ ဖမျးယူပေးပါတယျ။ အရှနေဲ့အနောကျကို 3D Gorilla Glass နဲ့ ကာကှယျထားတဲ့အတှကျ အကွမျးခံပါတယျ။ လကျဗှရောကိရိယာကို မကျြနှာပွငျအောကျမှာ မွှုပျနှံထားပါတယျ။ Warp Charge 30T က နာရီဝကျအတှငျးမှာ 3800 mAh Battery ကို 70 ရာခိုငျနှုနျး အားသှငျးပေးပါတယျ။ ပရိုဆကျဆာကတော့ Octa-Core Snapdragon 855 Plus နဲ့ ဖွဈပါတယျ။
လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်လောက်ကသာ ကျစ်လျစ်သေးငယ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းလေးတွေဟာ ကင်မရာတွေနေရာမှာ အစားထိုးနိုင်တယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရယ်သွမ်းသွေးစရာကိစ္စ၊ လှောင်ပြောင်စရာကိစ္စအနေနဲ့ ရှိနေမှာပါ။ အနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်အင်တွေကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အခု 2020 ခုနှစ်ကိုရောက်ဖို့ နီးလာတဲ့အချိန်မှာ 108MP ကင်မရာဆင်ဆာတွေတောင် ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ ဖြစ်တန်စွမ်းတွေကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ 2019 ခုနှစ်အတွင်းမှာ စမတ်ဖုန်းဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာတဲ့အချက်ကတော့ အဲ့ဒီဖုန်းမှာ notch ခပ်သေးသေးလေး ပါဝင်မှာပါ။ ဒီထက်ပိုရင်တော့ အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ3လုံး (သို့)4လုံး ဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 2019 ခုနှစ်အတွင်း စမတ်ဖုန်းနည်းပညာလောကအတွက် အပြောင်းအလဲဆုံး နည်းပညာဆိုရင်တော့ ကင်မရာလို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီထက်အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကင်မရာဆင်ဆာအရွယ်အစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ dual-Camera ခေတ်ကနေ အခုဆိုရင် Quad-Camera ခေတ်တောင် ရောက်နေပါပြီ။ အဲ့လောက်ကင်မရာတွေ အဆင့်မြင့်လာခဲ့တော့ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်ဟာလေးက ပိုကောင်းမလဲဆိုတဲ့ ရွေးချယ်ရခက်တာမျိုးတွေ ကြုံရမှာပေါ့။ ဒီကြားထဲ ဒီဇိုင်းပိုင်းကို ဦးစားပေးကိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင် ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းဟာ ဒီဇိုင်းနဲ့ ကင်မရာ2မျိုးလုံးမှာ ပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်ရဲ့လား။ သေချာတာကတော့ ကင်မရာရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ 2019 မှာ ဘယ်စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့လဲ။ သူတို့မှာရော ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်နေလဲဆိုတာ တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ကင်မရာဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မူတည်ပြီး ရွေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်ဖုန်းဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် အကောင်းဆုံးရုပ်ထွက်ကို ရရှိနေစေမှာပါ။
သူ့ကိုတော့ MP လို့ အတိုကောက် ခေါ်ကြပါတယ်။ pixel count တွေများလေ သင့်ဖုန်းကင်မရာ ကောင်းလေလားဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားအချက်တွေနဲ့ ထပ်မံပေါင်းစပ် ပေးရပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ ဒီနေ့ထွက်နေတဲ့ ဖုန်းတွေဟာ pixels ပိုင်းမှာ ပိုများပြီး image တွေကို detailed ဖမ်းယူနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ resolution ပိုင်းကလည်း ကြီးမားပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင် 48MP ကင်မရာတပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေတောင် ဈေးကွက်ထဲမှာ အတော်ရောက်နေပါပြီ။
ဒီအပိုင်းကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဆင်ဆာဟာ ကင်မရာရဲ့ အသည်းနှလုံးလို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆင်ဆာအရည်အသွေးရှိမှာသာ ကောင်းမွန်လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေနဲ့ ညအလှတွေကို အကောင်းဆုံး ဖမ်းယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 48MP ကင်မရာတွေအတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ ဆင်ဆာတွေကတော့ Sony IMX586 နဲ့ Samsung GM1 sensors တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော Depth of Field (DOF effect) လို့ခေါ်တဲ့ Background Blur ပုံတွေ ရရှိနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း လက်ရှိထွက်ထားသမျှ ဖုန်းတွေတိုင်းမှာ ပါဝင်နေပါပြီ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ရာမှာ Subject တစ်ခုကို Focus ဖမ်းရာတွင် Focus ပြတ်သားမှုဧရိယာဟာ Subject ရဲ့ ဘေးဘယ်ညာ ပြင်ညီပေါ်တွင် တစ်ပြေးတည်း ကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါ Subject ရဲ့ရှေ့မှာ ဘယ်လောက်အထိ ပြတ်သားမလဲ။ နောက်မှာရော ဘယ်လောက်အထိ ပြတ်သားမလဲဆိုတာကတော့ Depth of Field နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လူပုံ (Human Portrait) ရိုက်ရာတွင် အထူးပြုပြလိုတဲ့ နေရာလေးကိုဘဲ အဓိကပြပြီး ပုံကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် နောက်ခံ (Background) ကို တတ်နိုင်သလောက် ၀ါးနေစေပါတယ်။ ဒါကို DOF အပါး (Shallow Depth of Field) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ Depth of Field အထူ-အပါး ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ အကြမ်းအားဖြင့် Aperture အကျဉ်းအကျယ်၊ Focal length အတိုအရှည်၊ Subject နဲ့ ကင်မရာအနီးအဝေးတို့အပြင် ကင်မရာ Sensor အရွယ်အစားတို့နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ image တွေ detail ကျကျ ရနိုင်စေဖို့အတွက် မြင့်မားတဲ့ resolution ကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဖုန်းကင်မရာတွေအနေနဲ့ 720p, 1080p ကနေ အခုဆိုရင် 4K ထိတောင် ရနေပါပြီ။
iPhone 11 Pro ကတော့ အစဉ်အလာအတိုင်းပဲ အကောင်းဆုံး ကင်မရာဖုန်းတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကတော့ ကြီးလွန်းပါတယ်။ ဒီဖုန်းရဲ့ ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ Dynamic range တွေ ပိုကောင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးနဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ 4K ဗီဒီယိုများကို 60fps နှုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တာပါ။ iPhone 11 Pro ရဲ့ နောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ3လုံး တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone Xs ထက် 1 လုံး ပိုလာတာပါ။ အပိုပါလာတဲ့ ကင်မရာဟာ 12-megapixels ဖြစ်ပေမယ့် full-frame ကင်မရာတွေလိုမျိုး 13mm lens နဲ့အတူ ultrawide field of view စွမ်းဆောင်ချက်ကို ပေးပါတယ်။ နောက်ထပ် ကင်မရာ2လုံးကတော့ 12MP တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာဒီဇိုင်းကတော့ လေးထောင့်ခပ်ဆန်ဆန်ပါ။ Pro ရဲ့ ကင်မရာစနစ်တွေကို အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် 12-megapixel wide-angle lens ၊ 12-megapixel telephoto lens နဲ့ 120-degree field of view ပါတဲ့ 12-megapixel ultrawide lens တို့ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Telephoto နဲ့ ultrawide2ခု ပေါင်းပြီး zoom in (သို့) out အလုပ်ကို လုပ်မှာပါ။ ရိုက်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ပိုမို details ကျဖို့နဲ့ pixels ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုမာလာစေဖို့အတွက် ကင်မရာနည်းပညာအသစ်ဖြစ်တဲ့ Deep Fusion feature ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ camera modecamera modes အသစ်အနေနဲ့ 4K video တွေကို 60fps နဲ့ရနိုင်မှာပါ။
XiaomiMi CC9 Pro Premium Edition ရဲ့ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာ DXOMARK Camera tests ပြုလုပ်ပြီးနောက် overall score အမှတ်ပေါင်း 121 မှတ်ရရှိပြီး ထိပ်ဆုံးမှာ Huawei Mate 30 Pro နဲ့အတူ ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။1/1.33″ Quad-Bayer sensor ဖြစ်တဲ့ 108MP ပါ။ 0.8µm pixel size, 25mm f/1.7 lens နဲ့ပါ။ Premium edition မှာတော့ 8P lens ကို သုံးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက 2x zoom ဖြစ်တဲ့12MP, f/2.0, 1.4µm pixel size, dual-pixel AF ၊ ပြီးတော့ 5x zoom ကင်မရာ 5M, f/2.0, saves 8MP ၊ Ultra wide-angle က 20MP, 13mm f/2.2, 1.12µm pixel size ၊ ပြီးတော့ Macro ကင်မရာ 2MP, 1/5″, 1.75µm pixel size, f/2.4; AF, 1.5-10cm focusing distance တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက် notch ထဲမှာတော့ 32MP, 0.8µm pixel size, f/2.0 ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကင်မရာတွေအတွက် Dual flashes တပ်ပေးထားပြီး hard light နဲ့ soft light ကို ခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်။ Mi CC Pro ရဲ့ ကင်မရာစနစ် အလုပ်လုပ်ပုံဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ဆင်ဆာအားလုံးပေါင်း အလုပ်လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး 1 ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးတာပါ။ 1.1x ကနေ 1.9x အထိ ချဲ့ဖို့အတွက် အဓိကအာရုံခံကိရိယာကို သုံးပါတယ်။ 2x ကနေ 3.7x အထိ ချဲ့ဖို့ကိုတော့ 12MP 2x telephoto ကင်မရာကို သုံးပါတယ်။ 3.8x ကနေ 50x အထိ ချဲ့ဖို့ကိုတော့ 5MP 5x telephoto ကို အသုံးပြုပါတယ်။ 10x hybrid zoom အတွက်5MP sensor ကို သုံးပြီး 10x zoom အထက်ကိုတော့5MP ကင်မရာရဲ့ digital zoom ကို အသုံးပြုပါတယ်။
အကောင်းဆုံးတွေထဲက ပုံမှန်ထက်ခွဲထွက်နေတဲ့ ဖုန်းလို့ဆိုရမှာကတော့ Pixel4ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ကင်မရာတွေအတွက် Dual Pixel autofocus သုံးထားတဲ့ 12MP sensor ကို သုံးထားပါတယ်။ ကင်မရာတွေမှာ optical နဲ့ electronic image stabilization တွေ ထည့်ထားပြီး 1.4µm pixels နဲ့ bright f/1.7 aperture တွေကိုပါ သုံးနိုင်မှာပါ။ နောက်ထပ် ကင်မရာတစ်ခုကတော့ 16 MP Telephoto lens ဖြစ်ပါတယ်။ optical နဲ့ digital focus ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ 2x zoom ကို သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းသတင်းတွေ ထွက်ထားတဲ့ Motion Sense လို့ဆိုတဲ့ feature သစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းလာပါတယ်။ Motion Sense မှာ Google ရဲ့ Project Soli နည်းပညာ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဖုန်းရဲ့ display ရှေ့မှာ လက်နဲ့ဝှေ့ယမ်းလိုက်တာနဲ့ သီချင်းတွေကို ထိန်းချုပ်တာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ ထိန်းချုပ်တာလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Motion Sense ကို ဘယ်အချိန်မဆို disable လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဓိကကင်မရာဟာ 4K 30fps video capture နဲ့ 120fps slow-motion mode တွေကို သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Pixel4အတွက် 8MP selfie ကိုသာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ 1.22μm pixel size, f/2.0 aperture, 90° FOV, 1080p 30fos video recording ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Mate 30 Pro ဖုန်းရဲ့ ကင်မရာပိုင်းအတွက် ကင်မရာလေးလုံးကို နောက်ဘက် အလယ်တည့်တည့်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကင်မရာတွေကတော့ 40MP Super Sensing ကင်မရာ၊ 40MP ကင်မရာ (Cine Camera) တို့ ပါဝင်ပြီး 40MP ကင်မရာနှစ်လုံးကို 3D ToF Sensor နဲ့ တွဲသုံးကာ Bokeh ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ တတိယကင်မရာက 8MP ဖြစ်ပြီး 3x Optical Zoom ပါဝင်ကာ 5x Optical Hybrid Zoom အထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Tele နဲ့ Wide ကင်မရာနှစ်မျိုးလုံးတို့မှာ Optical Image Stabilization ပါဝင်လာပါတယ်။ 40MP ကင်မရာဆင်ဆာနှစ်ခုလုံးတို့က ကြီးမားတဲ့အပြင် အလင်းဝင်ပေါက် ပိုကျဉ်းလာပါတယ်။ အဓိကကင်မရာမှာ f/1.6 Aperture သုံးထားပြီး Cine Camera မှာ f/1.8 Aperture ပါဝင်လာပါတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကို ပိုကောင်းအောင် အဆင့်မြင့်တင်ထားပြီး 4K@60fps ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Slow-Motion Mode မှာလည်း Frame Rate အတော်မြင့်သွားပြီး 7680fps@720p ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ HDR+ Colors ဖြင့် 4K Time Lapse ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ညဖက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါ ISO 52000 အထိ သုံးလာနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာကတော့ 32MP ဖြစ်ပြီး 3D Scanning Hardware လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ dual-LED flash, laser focus sensor, color temperature sensor နဲ့ 3D sensor တို့ ထောက်ပံ့ပါတယ်။
Note 10+ ရဲ့ ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ ပုံမှန်ကင်မရာ3မျိုးမှာ ToF Camera တစ်လုံးအပိုပါပြီး အရာဝတ္ထုတွေကို Scan လုပ်ပြီး 3D Photo အဖြစ် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာ3လုံးရဲ့ စွမ်းရည်တွေက 12MP Dual Pixel ၊ 45°FoV, f/2.4 aperture နဲ့ 12MP Telephoto lens ၊ 123° Ultra Wide sensor ပါတဲ့ 16MP ကင်မရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာတော့ 80° wide-angle lens, f/2.2 aperture ပါတဲ့ 10MP Dual Pixel ကင်မရာကို တပ်ပေးထားပါတယ်။ 12MP Dual Pixel ကင်မရာဟာ f/1.5/f/2.4 variable aperture အမျိုးအစားပါ။ သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်က 6.8-inch Quad HD+ (3040 × 1440 pixels) တောင်ရှိပြီး Curved Dynamic AMOLED Infinity-O display ကို သုံးထားပါတယ်။ Note10+ မှာတော့ ပုံမှန် Note နဲ့ ကွဲပြားမှုတွေရှိနေပြီး 12GB RAM အမြင့်စားနဲ့ သုံးနိုင်မှာပါ။ ပရိုဆက်ဆာပိုင်းမှာတော့ Note 10 နဲ့ တူတူပဲလို့ ဆိုနိုင်ပြီး Global အလုံးမှာတော့ 7nm Mobile Platform ဖြစ်တဲ့ Octa-Core Samsung Exynos9Series 9825 ကို သုံးထားပြီး အမေရိကန်ဗားရှင်းဖုန်းမှာတော့ Snapdragon 855 7nm Mobile Platform နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Android 9.0 (Pie) ကို သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4300 mAh မှာ 45W fast wired charging ထောက်ပံ့မှာပါ။
တိကျသေချာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်တဲ့နေရာမှာ သူကလည်း ထိပ်တန်းအဆင့် ရှိနေပါတယ်။ OPPO Reno 10x Zoom စမတ်ဖုန်းတွင် အဝေးမှ ပုံရိပ်များကို lens သုံးခု ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သော 10x Hybrid Zoom နဲ့အတူ 60x Digital Zoom ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Reno 10x Zoom တွင် OIS စနစ် ထောက်ပံ့ပေးထားသော F/1.7 aperture ပါဝင်သည့် 48MP Sony IMX 586 main camera, 8MP 120° Ultra Wide-Angle Camera နှင့် 13 MP Telephoto Camera တို့ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
OnePlus 7T ဖုန်းကလည်း ကင်မရာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာ အဆင့်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေပါသေးတယ်။ 90Hz Refresh Rate ကို သုံးထားပြီး HDR10+ က အရောင်အသွေး ပိုစုံလင်စေပါတယ်။ အပူလျှော့ချပေးတဲ့ နည်းပညာလည်း ပါပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ3လုံးပါလာပြီး 48MP Main Camera နဲ့အတူ မြင်ကွင်းကျယ်နဲ့ အနီးကပ်ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ 16MP Camera ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 2x Optical Zoom ပါတဲ့ 12MP Telephoto Camera ထည့်ထားပါတယ်။ Nightscape Mode က အလင်းရောင်နည်းပါးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြည့်စုံတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ဖမ်းယူပေးပါတယ်။ အရှေ့နဲ့အနောက်ကို 3D Gorilla Glass နဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့အတွက် အကြမ်းခံပါတယ်။ လက်ဗွေရာကိရိယာကို မျက်နှာပြင်အောက်မှာ မြှုပ်နှံထားပါတယ်။ Warp Charge 30T က နာရီဝက်အတွင်းမှာ 3800 mAh Battery ကို 70 ရာခိုင်နှုန်း အားသွင်းပေးပါတယ်။ ပရိုဆက်ဆာကတော့ Octa-Core Snapdragon 855 Plus နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleအမေးမြားသော မိုဘိုငျးဖုနျးဆိုငျရာပွဿနာမြား
Next articleNwsty – Headlines & Daily Breaking News Summaries
OPPO X2 Series Event : 120Hz Screen And 5G, X2 Pro Adds A Periscope Camera
MWC 2020: everything to expect from the world’s biggest mobile phone...
Do 64-megapixel phone cameras really makeadifference?
All of the biggest announcements from Samsung’s Galaxy S20 event